Iindaba - XYTOWER |Iindaba ezimnandi!Sivuyisana ngokuPhumelela kwethu Isihloko soShishino loBugcisa obuPhezulu
XYTOWER |Iindaba ezimnandi!Sivuyisana ngokuPhumelela kwethu Isihloko soShishino loBugcisa obuPhezulu
Ngokutsho kwemilinganiselo yovavanyo lwenzululwazi kunye nobuchwepheshe amashishini amancinci naphakathi (gkfz  No. 115) kunye nesaziso soMphathiswa wezobuNzululwazi kunye noBuchwephesha kunye noLawulo lweSizwe lweRhafu kwimiba enxulumene novavanyo lwezenzululwazi. kunye neTekhnoloji yamashishini amancinci naphakathi,XYTOWERinikwe ireyithingi njengeshishini lobugcisa obuphezulu.
Ibhaso "loshishino oluphezulu lwe-tech" e-Chengdu lisinike inkuthazo enkulu, engeyona nje imbeko, kodwa kunye namandla okuqhuba.Ayikokuqinisekisa kunye nokuqondwa kuphela kwesakhono sophando lwenzululwazi yenkampani yethu kunye nenqanaba lobugcisa lilonke, kodwa ikwayinkuthazo kunye nenkuthazo yophando lwenzululwazi yenkampani kunye nabasebenzi abasungula izinto ezintsha!Ukuthatha le ngqalelo njengethuba kunye namandla okuqhuba, inkampani iya kuqhubeka nokubambelela kwingqikelelo "yophuhliso kunye nokutsha" kunye nomgaqo wesayensi kunye nethekhnoloji ekhonza imarike, ukwandisa ngakumbi utyalo-mali kwi-teknoloji ye-R & D, ukuhlakulela iqela letalente, ukuzama ukuphucula amandla okwenza izinto ezintsha ezizimeleyo, ukunika umdlalo opheleleyo kwiinzuzo zawo kwaye uzame ukuqonda umtsi omkhulu wophuhliso lwenkampani.
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani iqhubekile isomeleza uphuhliso lweemarike zangaphakathi nangaphandle, yasebenza nzima ukuphucula ukhuphiswano olungundoqo lweshishini, ikhuthaze uphuhliso oluzinzileyo nolunempilo lweshishini lenkampani, iteknoloji yenkonzo ephuculweyo, ikhuthaze ngokunzulu uhlengahlengiso lwendlela entsha. , kwaye ihlala iqhuba uphando kunye nophuhliso malunga neenkonzo zobugcisa.
"Umgangatho wesayensi kunye nobugcisa obutsha buhamba kunye namaxesha."Ngumgaqo-nkqubo womgangatho ebesisoloko siwulandela.
"Ukufuna ukugqwesa kunye nokuvelisa izinto ezintsha"lusukelo lwethu.
Kwixesha elizayo, siya kuqhubeka ukomeleza ukuqamba izinto ezintsha, ukuvuselela umdlandla, kwaye ngentliziyo epheleleyo sibonelela ngeenkonzo zobuchwephesha ngakumbi kubathengi bethu ngomoya wepragmatism kunye nokusungula izinto ezintsha, ukuze sincede abathengi basombulule iingxaki kwaye banelise abathengi!
XYTOWER ihlala ibonelela abathengi ngothotho lweinqaba yentsimbiiinkonzo eziyeleleneyo kunye nowona mgangatho wobuchwephesha kunye nenkxaso yobuchwephesha kunye neenkonzo zoqinisekiso lobuchwephesha, ezikhawulezayo nezinomdla eziqukayo.